Mpandeha Fitaterana Fitsipi - Mpandeha
Zaza latsaky ny folo dia tsy mahazo mandeha amin’ny lavitra fiaran-dalamby raha tsy miaraka amin’ny olon-dehibe afa-tsy amin’ny toe-javatra ny mpianatra na mpianatra manatrika ny toeram-pampianarana amin’ny lalamby. Ao amin’ny iray amin’ireo tapakila, mpandeha dia afaka mitondra ny tanana entana milanja tsy mihoatra ny enina amby telopolo kilao (na dimam-polo kg amin’ny kalesy roa-berth efitrefitra (natory kalesy) maimaim-poana. Ny isa ny tanana entana ny lafiny telo tsy tokony hihoatra ny sm. Ankoatra ny namela ny tanana entana, isaky ny mpandeha dia mahazo maka ny kitapo, poketra, binoculars, ski sy ski tapa-kazo, ny jono tehina, ny fakan-tsary, elo, ary hafa kely ny zavatra maimaim-poana manome ny vola ny lafiny telo no tsy mihoatra ny zato sm. Ny nametraka fitsipika eo amin’ny tanana mamela ny entany ny mpandeha tamin’ny lavitra fiaran-dalamby hitondra prams, kayaks sy ny bisikileta tsy motors rehefa disassembled sy feno. Ny nametraka fitsipika eo amin’ny tanana mamela ny entany ny mpandeha amin’ny commuter fiaran-dalamby hitondra ny fitaterana ny zava-maniry, zana-kazo sy ny hafa fambolena fitaovana tsy mihoatra ny haavon’ny sm. Ny satro-boninahitra dia tsy maintsy ho voafatotra sy ny sampana nofonosiny. Any amin’ny faritra izay fepetra maro maneritery na ny fanokanan-toerana misy ny mpandeha dia tsy maintsy manolotra tahirin-kevitra navoakan’ny Fanjakana Maso ny Fanokanan-toerana Zavamaniry mba ho azo antoka ny fitaterana. Mpandeha atao tsy mihoatra ny iray amin’ny bisikileta ao noravana endrika amin’ny fidirana vestibule ny suburban commuter fiaran-dalamby noho ny fiampangana. Zavatra izay mety hanimba na mandoto ny kalesy, na ireo mpandeha’ ny zavatra na hafa malodorous, flammable, misy poizina, flammable, mipoaka sy ny hafa mampidi-doza ny zavatra tsy azo raisina ho toy ny tanana entana. Rehefa nentina toy ny tanana entana, ny fitaovam-piadiana dia tsy maintsy ho entina namaha ny entana tamin’ny raharaha iray, holster na miavaka ny raharaha natao misaraka amin’ny bala. Ao amin’ny iray amin’ireo tapakila, mpandeha dia afaka maka entana milanja tsy misy mihoatra noho ny roan-jato kg. Zavatra sy ny zavatra tsy azo nentina izay milanja latsaky ny folo kilao na mihoatra noho ny kg, na raha ny halavan’ny lafiny iray dia mihoatra ny m. Indivisible toerana milanja avy kg ny kilao sy miaraka amin’ny halavany ny iray amin’ireo fandrefesana tsy mihoatra ny m, toy ny vata fampangatsiahana, na fatana gazy, dia ekena ho toy ny kalesy entana, fa tsy mihoatra ny iray toy ny zavatra mahazo isaky ny tapakila. Isaky ny tapa-entana tsy maintsy mety tsara ilay mendrika ny mitondra rehefa loading fototra sy mampidina entana. Fonosana na vata dia tsy maintsy azo antoka ny fahamarinan-toetra ny entana mandritra ny fitaterana dingana. Rehefa nitondra zava-maniry, zana-kazo sy ny hafa fambolena fitaovana toy ny entana, dia tsy maintsy ho anaty baoritra mba hiantohana ny tsy fivadihany ny fitaterana sy ny tsy contaminate ny entana sy ny entana ny mpandeha hafa. Ny zavatra tsirairay mba ho entina ao amin’ity tranga ity dia tsy tokony hihoatra ny dimy amby roapolo kilao amin’ny lanja sy roan-jato sm ny lavany, ny ambony na ny sakany. Zavatra toy izany ihany no azo ekena ho dispatch avy amin’ireo any amin’ny faritra ambany ny fanokanan-toerana, raha ny mpihazona ny fanokanan-toerana ny tahirin-kevitra mampiseho ny taratasy fanamarinana fa izy s manana zo fitaterana fitaovana fambolena any araka ny nametraka ny fitsipika sy ny tsy transshipment teny an-dalana. Federaly Mpandeha Orinasa fiaran-dalamby avela hitondra ny manaraka fanatanjahan-tena, ny fizahan-tany sy ny fihazana fitaovana (izay tanteraka ny habeny amin’ny lafiny telo lavany x sakany x haavo dia afaka mihoatra ny sm): a) snowboards, ski sy ny miaraka ski tsato-kazo, izay tsy maintsy voatahiry ao amin’ny toerana mitondra-amin’ny entany na miaraka amin’ny mpandeha nitondra azy tany an-kalesy tamin’ny fomba toy izany mba tsy hanelingelina ny hafa mpandeha. Tsy misy sarany fa mitondra zavatra ireo dia ho voampanga ny mpandeha.
b) aforitra kayaks sy lakana, aforitra kayaks sy paddles izay napetraka tao amin’ny sehatra ho an’ny mitondra-amin’ny entany na miaraka amin’ny mpandeha nitondra azy tany an-kalesy tamin’ny fomba toy izany mba tsy hanelingelina ny hafa mpandeha. Ny sarany dia ho voampanga ho an’ny tsirairay lakana (kayak) natao tao anaty fiaran-dalamby tao amin’ny tahan’ny ho an’ny entana milanja telo kilao c) unmotorized bisikilety ao noravana sy feno endrika izay napetraka tao amin’ny sehatra ho an’ny mitondra-amin’ny entany na miaraka amin’ny mpandeha nitondra azy tany an-kalesy tamin’ny fomba toy izany mba tsy hanelingelina ny hafa mpandeha. Ny sarany dia ho voampanga ho an’ny tsirairay bisikileta nentina teo ny fiaran-dalamby tao ny tahan’ny ho an’ny entana milanja folo kilao d) ny fihazana sy ny fanatanjahan-tena basy nentina namaha ny entana tamin’ny toe-javatra, holsters na manokana mitondra ny toe-javatra sy misaraka amin’ny bala napetraka tao amin’ny sehatra ho an’ny mitondra-eo amin’ny entany. Ny sarany dia ho voampanga noho ny vondrona tsirairay sy ny fitaovana nentina teo ny fiaran-dalamby tao ny tahan’ny ho an’ny entana milanja folo kilao ny Saina. Avy dimy amby roa-polo Mety ho dimy amby roa-polo tamin’ny volana jolay amin’ny taona, ny fitaterana, ary nitondra ny fitaovam-piadiana sy ny bala ao anaty fiaran-dalamby ho an’ireo tanàna mampiantrano ny fiadiana ny Amboara Erantany mifanaraka sy ny tsirairay baolina kitra andia-miaramila dia voarara: Anapa, Volgograd, Voronezh, Grozny, Yekaterinburg, manan-Danja, Kazan, Kaliningrad, Kaluga, Krasnodar, Maosko, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, St.
Petersburg, Saransk, Settlors sy Togliatti
Izany fandraràna izany dia mifanaraka amin’ny Federasiona rosiana ny fifidianana Filoham-pirenena ny Didim-panjakana No.»Momba ny Fampiharana Kokoa amin’ny fitandroana ny Filaminana mandritra ny taona fiadiana ny Amboara Manerantany FIFA sy ny FIFA Kaonfederasionan’ny Fiadiana tompon-daka amin’ny Federasiona rosiana»mitondra ny datin’ ny sivy volana May. e) ny fanatanjahan-tena tsato-kazo nentina tao amin’ny efitra kalesy sy ny kalesy miaraka -berth efitrefitra (matory efitra). Tsato-kazo dia tsy maintsy mifandray sy miara-apetraka uniformly miaraka ny casing ny fanafanana fantsona ao an-dalantsara, toy ny tsy hanelingelina ny andalan-teny ny mpandeha miaraka amin’ilay lalantsara. Fanatanjahan-tena tsato-kazo ihany no afaka ny ho feno amin’ny fialàn’ny fiaran-dalamby station sy kafa toby izay ny fiaran-dalamby mijanona, fara fahakeliny dimy minitra avy amin’ny sehatra avo amin’ny alalan’ny varavarankely eo amin’ny lalantsara side ny kalesy. Tsato-kazo ho afaka namaha ny entana tamin’ny toerana toby ihany rehefa mpandeha rehetra no voalohany tanteraka nidina avy any an-kalesy. Ny sarany dia ho voampanga ho an’ny tsirairay tsato-kazo entina eo amin’ny fiaran-dalamby tao ny tahan’ny ho an’ny entana milanja folo kilao. Tsy misy mihoatra ny roa ny fanatanjahantena tsato-kazo mety ho entina eo amin’ny tapakila iray. Ny mpitarika ny mpandeha kalesy izay ny fanatanjahan-tena tsato-kazo dia nentina no tompon’andraikitra amin’ny fanamarinana ny loading sy mampidina entana ny tsato-kazo. Famandrihana ny sambo antontan-taratasy ho toy izany fitaovana azo entina avy any amin’ny daty rehefa ny tapakila ho an’ny seza ao anaty fiaran-dalamby mankany amin’ny fivarotana, ary talohan’ny nandehanany, na inona na inona ny daty ny mpandeha nividy ny tapakila. Amin’ny suburban commuter fiaran-dalamby, ski sy ny miaraka ski tsato-kazo dia afaka ho entina maimaim-poana rehefa tanteraka ny lafiny telo mihoatra ny sm ny fanomezana, izy ireo dia voatahiry ao amin’ny toerana natao ho an’ny mitondra-eo amin’ny entany. Iray ihany ny mpivady ny ski afaka ho raisina amin’ny tapakila iray. Ny sarany dia voampanga ho mitondra ski eo amin’ny faritra ny fandidiana serviced ny manaraka suburban commuter orinasa: Foibe Suburban Mpandeha Orinasa, Bashkortostan Suburban Mpandeha Orinasa sy Transbaikal kaya Suburban Mpandeha Orinasa. Ski azo natao maimaim-poana amin’ny iray volana desambra ho folo volana Martsa eo amin’ny faritra ny fandidiana serviced amin’ny Avaratra-Andrefana Suburban Mpandeha Orinasa. Ireo mpandeha mitondra ny hany tompon’andraikitra hahazoana antoka ny fahamarinan-toetra sy ny fiarovana ny entana sy ny entany. Ankoatra ny ara-dalàna ny vola fanampiana ho an’ny tanana entany, sokajy rehetra ny kely biby fiompy, alika sy vorona azo entina tamin’ny kalesy rehetra (afa-tsy kalesy roa-berth efitrefitra (matory kalesy) sy deluxe kalesy) raha ny fitsaboina momba ny biby taratasy fanamarinana ara-pahasalamana dia hita sy ny fiampangana dia karama ho an’ny fitaterana araka ny andininy -ny Fitsipika ho an’ny Nitondra Mpandeha, Entana sy ny Entany amin’ny Federaly fitaterana an-dalamby. Kely ny biby fiompy, alika sy vorona dia tsy maintsy ho entina any amin’ny boaty, harona, cages, na ny fitoeran, izay tsy maintsy apetraka amin’ny toerana natao handraisana ny tanana entana. Ny tompony dia ho mendrika ara-nofo ho an’ny fitaterana ny kely biby fiompy, alika sy vorona tsy misy fandoavam-bola araka ny lalàna ao amin’ny Federasiona rosiana. Tompon’ny kely ny biby fiompy, alika sy vorona, na ireo miaraka aminy, dia tsy maintsy manaraka ny kalesy ny fahadiovana fitondrana rehefa nitondra ny biby. Tsy mahazo mitondra ny bibidia toy ny tanana entana ao anaty fiaran-dalamby sy ny kalesy ny sokajy rehetra. Miasa ny alika afaka ho nentina, raha toa izy ireo dia voatampim-bava sy amin’ny leash, tamin’ny iray misaraka efitra ny efitra kalesy eo ambany fanaraha-mason’ny tompony na ny mpandeha miaraka amin’ny fandoavana manontolo ny vidiny ny seza rehetra tao amin’ny efitra tsy misy fanampiny fandoavam-bola ho an’ny ny fitaterana. Ny isan’ny alika sy ny tompony na miaraka amin’izany ho an’ireo mpandeha an-efitra dia tsy tokony hihoatra ny isan’ny seza ao amin’ny efitra. Ao suburban commuter fiaran-dalamby, miasa alika afaka nentina ho eo ambany fanaraha-mason’ny tompony na ny mpandeha miaraka amin ny fandoavam-bola ny fitaterana. Ny fitaterana ny lehibe ary miara-miasa ny alika ao suburban commuter fiaran-dalamby dia voampanga, araka ny Fepetra voalaza tetsy ambony. Kely ny biby fiompy, ny alika, ny vorona sy ny tantely dia afaka ho nentina tany amin’ny entana fiara tsy transshipment teny an-dalana. Ny biby dia tsy maintsy entina eo amin’ny fitoeran manokana na ny fitoeran-trays (ao amin’ny harona, cages, kesika) sy voaro fahavoazana sy ratra sy ny fandotoana ny kalesy sy ny entana ao amin’ny entana fiara. Ny asany dia tsy tompon’andraikitra amin’ny fanomezana sakafo ny biby. Biby fiompy dia nanaiky ny fitaterana ny entana fiara izay izy ireo dia ho entina tsy taty aoriana noho ny iray ora mialoha ny fialàn’ny fiaran-dalamby. Ny fandraisana entana mandritra ny fitaterana dia namoaka. Raha toa ny fandraisana entana very, ny biby mety ho nanolotra ny mpandray amin’ny fanolorana ny maha-tahirin-kevitra sy ny porofo fa io entana an’ny azy azy. Ny biby dia tsy maintsy ho nangonina any amin’ny toerana fiantsonana avy hatrany amin ‘ny nahatongavan’ ny fiaran-dalamby izay izy ireo no nentina, nefa tsy taty aoriana noho ny roa ambin’ny folo ora taorian’ny fiaran-dalamby ny fahatongavany. Raha toa ka ny biby dia tsy nangonina, ny lalamby orinasa no mitondra ny lohateny hoe izay tiany izany ny fomba voalaza
Pitsarana sivily ao Rosia: ny sasany ny lafiny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fahafahana hahazo ny rariny